Archive du 20180123
Fanenjehana sy ramatahora “Sahy aho matoa mijoro”, hoy Ravalomanana
Nihaona tamin’ny mpanao gazety tao Tolagnaro omaly hariva taorian’ny fanakanana ny fihaonana saika hotanterahany tamin’ny mponina tao an-toerana Atoa Marc Ravalomanana, filoha nasionalin’ny Tiako I Madagasikara, niresahany ny fifidianana sy ny fiainam-pirenena amin’ny ankapobeny. Nanana solontena nanatrika izany ny Tia Tanindrazana.
Hery Rajaonarimampianina Miantehitra amin’ny tafika
Nirarakopana ny fampiakarana galonana, ka omaly no notolorana faneva teny Iavoloha ireo jeneraly 56 vao avy nahazo fampiakarana galona avy amin’ny filoham-pirenena.
Harimanana Raniriharinosy Manahy korotam-be
Zava-dehibe ho an’ny firenena an-dalam-pandrosoana toa an’i Madagasikara, hoy ny mpahay lalàna sady mpanao politika eo anivon’ny antoko Arema,
Fikambanan’ny Gadra politika Tokony havoaka alohan’ny fifidianana ny fanonerana
Nihaona tamin’ny filohan’ny FFM, Maka Alphonse tetsy amin’ny birao fiasany tetsy Ampefiloha ny faran’ny herinandro teo ny Fedep na ny Federasion’ireo gadra politika Malagasy notarihan’ny filohany Rakotomalala Henri na i Riribe. Miantsoantso fitoniana ny FFM ankehitriny, hoy izy ireo, nefa tsy hita izay fanapahan-kevitra tena raisiny.
CLRE Antananarivo Renivohitra sy ny manodidina Misy lehiben’ny fokontany tsy mety mandray azy ireo
Nihaino ny tatitra nataon’ireo CLRE na ny « Comité Locale pour le Recensement des Electeurs » tetsy Antaninandro ny faran’ny herinandro teo ny mpanolotsaina manokan’ny filoha lefitry ny TIM Faritanin’Antananarivo Ramalason Olga,
Potika sahady ny ankamaroan’ireo lalana namboarina ry Jean bizna. Ny eny Itaosy sy anosy sy Anosizato aloha no efa hita fa efa lasa lavaka be sahady ilay nandaniana ohatrinona teo.
Tolagnaro Nosomparan’ny Emmoreg Ravalo
Nogafiana tsotra izao ny fihaonana nataon'i Marc Ravalomanana tamin'ireo mpomba azy tany Tolaganro omaly. Vao niditra fotoana fohy tao amin'ny Resto la Vanille ny tenany, dia mpitandro filaminana mirongo fiadiana no tazana teo amin'ny vavahady.
Fanomezana tany 200 000 Km² ny sinoa Hipoaka tsy ho ela ny dosie maloto
Adinodino na tsy misy tohiny intsony amin’izao fotoana ny raharaha “Villa Elizabeth” sy ny maro hafa. Nilaza kosa ny minisitra teo aloha Tabera Randriamanantsoa fa mifandray matetika amin’ny Bianco ny CRN (Comité pour la Réconciliation Nationale),
Olana ao amin’ny boriborintany faharoa Azo soloina ny olona, hoy ny lefitry ny ben’ny tanàna
Tsy nijanona intsony fa dia mbola nitohy hatrany hatramin’iny omaly iny ny fitokonan’ireo mpiasa eo anivon’ny boriborintany faharoa hitakian’ny fialan’ny delege ao an-toerana, Jacques Ramanandraibe, na dia efa nisy aza ny fitsirihana nataon’ireo tomponandraikitra tamin’ny herinandro lasa teo.
Fiovan’ny toetrandro Mila mivonona miatrika izany ny Malagasy
Ny fiovan’ny toetrandro dia mety ateraky ny lalam-pivoarana anaty voajanahary na avy amina faneriterena ivelany na avy amina fanovana maharitra ataon’olombelona eo amin’ny taharon’ny atmôsfera na eo amin’ny fampiasana ny tany.
Pastera Mailhol Manohana 100 % ny kabarin’ny filohan’ny FJKM
Manohana 100 % ny kabarin’ny filohan’ny fiangonana FJKM ny mpitandrina Irako Andriamahazosoa Ammi tamin’ny Alahady teo teny amin’ny kianjaben’i Mahamasina ny pastera Mailhol mikasika ny fanentanany ny Kristianina mba hiroso bebe kokoa amin’ny fanaovana politika.
Baskety Baolina Malagasy Niova ny datin’ireo fifaninanana nasionaly rehetra
Noho ny fanovana ny datim-panadinam-panjakana navoakan’ny minisiteran’ny fanabezam-pirenena dia nandefa taratasy any amin’ny ireo ligy rejionalin’ny basikety rehetra eto Madagasikara,
Badminton Fantatra ireo Tompondakan’i Madagasikara vaovao 2017
Fantatra avy tamin’ireo lalao natao tetsy amin’ny kianja Mitafon’Ankorondrano ny 13 sy 14 ary 21 janoary 2018 teo ireo tompondaka vaovao 2017 an’ny taranja Badminton Malagasy tamin’ireo mpandray anjara am-polony maromaro avy amin’ny ligy 3 eo amin’ity taranja ity misy eto Madagasikara (Analamanga, Atsinanana ary Vakinankaratra).
« Tournoi baskety Ady omby d'Ambohimanarina 2.0 » Nahery ny JCSA vehivavy sy ny UNITE lehilahy
Nahery ny ekipan’ny Jcsa Ambohimanarina vehivavy, nandresy tamin’ny mokafohy ny Bad Team Alarobia (62-61).
Hiroso any an-davaka ?
Ny an-tratra tsy lavo, ka eo no mbola hoe antsoy ihany koa ny raiben’ialahy, hoy ny fitenena.
Hopitalin’ny reny sy ny zaza Tsaralalana Olona sahirana ny 80 %-n’ireo tonga mitsabo tena ao
Sahirana ara-pivelomana avokoa ny 80 %-n’ireo olona tonga mitondra ny menaky ny ainy hotsaboina etsy amin’ny hôpitalin’ny reny sy ny zaza etsy Tsaralalàna. Tsy mbola nisy tamin’izy ireo anefa, hoy ny profesora Annick Robinson, no noroahina na tsy notsaboina rehefa tsy manam-bola hamidy fanafody, fa raisin’ny “assistante sociale” avy hatrany ny fikarakarana, miankina amin’izay zava-misy eo am-pelatananan’izy ireo.
Toekarena Mitotongana tanteraka ny ariary
Tsy nitsahatra nitotongana ny vola Ariary tao anatin’ny telo volana farany manoloana ireo vola vahiny be mpampiasa eto amintsika. 3.950 Ariary ny vola eoropeanina ary 3.230Ariary kosa ny dolara.
Fadin-tseranana Nampahafantarina ireo lalàna vaovao
Omaly no natao tetsy amin’ny tranoben’ny Varotra sy Indostria ny fampahafantarana ny lalàna vaovao sy ny lalàna nasiam-panitsiana momba ny fadin-tseranana.
CISCO Fenoarivobe Natsahatra tsy nianatra ny kilasy nitrangan’ilay ambalavelona
Tsy niandry ela fa nandray ny andraikiny avy hatrany ny Ministeran’ny Fanabeazam-pirenena sy ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny eo anivon’ny fari-piadidiam-pampianarana Fenoarivo nanoloana ireo ankizy nihetsika aretina Ambalavelona tao amin’ny CEG Ankotrabe.
Houcine Arfa Mbola manana lezionera namana miriaria eto
Marobe ny fanontaniana mipetraka kanefa tsy voakasiky ny fanadihadiana akory momba ny raharaha Houcine Arfa. Feno basy tao an-tranony tamin’ny fotoana nisamborana azy teny Ambolokandrina, ary karazany maro mihitsy izany.
Mirongatra ny asan-jiolahy Maivana ny sazy, malalaka ny fivoahana ?
Mampiteny ny moana ity tsy fandriampahalemana andro aman’alina eto amin’ny firenena ity.
Fiara tsy misy taratasy na ny kely aza no nipetraka fotsiny teo amoron-dalana ary mivoha fotsiny, tetsy Bongatsara Andoharanofotsy. Mitondra ny marika Kia ilay fiara tsy mataho-dalana ary nentin’ny zandary ao amin’ny borigady aloha ary nanokafana fanadihadiana ny momba izay mety ho tompony.
Afaka 11 andro dia ho tapitra tanteraka ny fe-potoana farany hahafahan’ny olom-pirenena manamarina ny anarany ao anaty lisi-pifidianana eny anivon’ny fokontany. Midika izany fa izay tsy tafiditra ao anaty lisi-pifidianana hatramin’ny 31 janoary dia tsy afaka ny handray anjara amin’ny fifidianana mifanesy eto amin’ny firenena.